thetruesize.com bụ saịtị na-atọ ụtọ, ebe ị nwere ike ịchọta mba na onye na-ekiri GoogleMaps. Site na ịdọrọ ihe ndị ahụ, ị ​​ga-ahụ etu esi agbagọ mba ndị ahụ na ọdịiche dị na latitude. Dika egosiri na onyonyo a, ihe ntule a, mgbe ichoro ime ihe ntanye na ugbo elu na-eme ka ...
OpenGeo Suite: Otu ihe atụ nke GIS Software na-eche echiche banyere adịghị ike nke usoro OSGeo
Taa, ma ọ dịkarịa ala na gburugburu ụwa, ọkachamara ọ bụla na-eche echiche na-anọpụ iche na-achọpụta na ngwanrọ na-emeghe emeghe tozuru oke dị ka ngwanrọ azụmahịa, na n'ụzọ ụfọdụ ka elu. Standardskpụrụ ụkpụrụ ahụ rụrụ ọrụ nke ọma. Agbanyeghi na nguzosi ike ya nke imelite bu ihe ajuju n’agbanye ike o choro ...